RASMI: Tababaraha ku guuleysatay abaal-marinta macalinka bisha December ee Premier League oo la shaaciyay – Gool FM
(England) 14 Jan 2022. Waxaa la shaaciyey tabaraha ku guuleystay abaal-marinta macalinka bishii December ugu fiicnaa ee horyaalka Premier League, waxaana ku tartamayay magacyada macalimiin wacdaro ka dhigay horyaalka bishii la soo dhaafay.
Sida lagu xusay bogga rasmiga ah Twitter-ka ee horyaalka Premier League tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ku guuleystay abaal-marinta macalinkii ugu fiicnaa horyaalka Premier League ee bishii lasoo dhaafay ee December.
Pep ayaa ku hoggaamiyay kooxda Manchester City inay wada guuleysato toddobadii kulan ay ka wada ciyaartay horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay ee December.
Pep Guardiola ayaa ku guulaystay abaal-marintiisii 11-aad macalinka ugu fiican bisha ee horyaalka Premier League, waana macalinka saddexaad ee ugu hanashada badan abaal-marintan, kaliya waxaa ka badan Arsene Wenger oo 15 jeer ku soo guuleystay, iyo Sir Alex Ferguson oo 27 jeer ku guuleystay.
Si kastaba ha ahaatee, Macalinka reer Spain ayaa ku guuleystay abaal-marintan, kaddib markii uu ku garaacay tababarayaasha kala ah Mikel Arteta, Antonio Conte, iyo Jurgen Klopp.
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha December ee Premier League oo la shaaciyay